Mabhenefiti ekushanda neMSP kunze kweTech Support - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Zvakanakira Kushanda ne An MSP Kunze kweTech Support
Neyakawedzeredzwa digital mhinduro kupinda mukati mehupenyu hwedu, zvave zvichikosha zvakanyanya kuti tione kukwikwidza mukana mumusika. Iyo matambudziko hazvisi kuzotsika kana kune rumwe rutivi kune inogara ichikura yedhijitari nharaunda, kune rimwe divi, dambudziko redenda riri kupa nguva yakaoma mabhizinesi ese. Pakati pemamiriro ekuvhara, mabhizinesi anovharirwa kushanda munzvimbo yedhijitari. Uyezve, muzvinabhizinesi ari kunetsekana kana zvasvika pakubata mashandiro ezvivakwa zve bhizimisi uye chengetedza mari yacho isina kukanganiswa nekuchinja chinja.
Kunze kwekutsigirwa kwe tech, yakakosha kune yako bhizimisi kushandisa advanced Mabasa eIT. Anochengetedzwa masevhisi ekupa (MSP) yako bhizimisi inogona kukubatsira kukwenenzvera ese maitirwo ari kure nharaunda uye kubata ese mashandiro uye akazara bhizimisi IT zvivakwa nenzira inoshanda kwazvo. Izvi zvinowanzoita semutengo unodhura mhinduro kumabhizinesi asingangosimudze ako ese Cybersecurity mashandiro asiwo mucherechedzo wechiratidzo mumusika. Vakatungamira IT masevhisi emabhizimusi madiki kukubatsira kutora mukana weruzivo rwenyanzvi kuti ushande bhizimisi zvisarudzo. Inobatsirawo kubata uye kutarisa yako yese IT timu inoshanda kure kure mumakona akasiyana epasi.
Kubatsira kweVane Managed Services Vanopa (MSP)
Chinyorwa ichi chinoratidza zvimwe zvingabatsire zveManaged Services Services Provider (MSP) uye IT masevhisi emabhizimusi madiki.
Kana zvasvika kune IT kubvunza masevhisi, isu tinowanzo kunetseka nezve mutengo uye bhajeti. Nekudaro, kuhaya MSP kune manejimendi yako bhizimisi oparesheni haina mari yakawanda. Iyo yakanyanya kudhura-inoshanda mhinduro kune yako bhizimisi kana zvasvika pakutonga timu yese, bhizimisi purofiti, IT zvivakwa, uye mufananidzo wechiratidzo. Kushanda neMSP kunogona kukubatsira kuderedza mari isingakoshi uye zviwanikwa zvinodhura. Kunze kwetsigiro yetekinoroji, masevhisi eMSP uye kubvunzana kunogona kubatsira yako bhizimisi kukura.
Kushanda munharaunda yedhijitari kwakakosha kana zvasvika kune chibatiso yako bhizimisi. Kuwedzera chibatiso njodzi, kutyorwa kwedata, kurwiswa kwepamusoro-soro, hutsotsi hwekubhadhara ad huri kutoisa njodzi uye faindi dzemari. Naizvozvo, zvakakosha zvakanyanya kusimbisa iyo chibatiso maitiro ako bhizimisi kuderedza chero njodzi dzinogona kuitika dzinogona kuzopedzisira dzakanganisa yako bhizimisi kuita uye mari.
Kuhaya MSP kunovimbisa mutengo unofanotaurwa kwauri iwe ungave uine kondirakiti neMSP kana wakahaya uye uchibhadhara pamwedzi unozove wakajeka kana zvasvika pakuziva mutengo. Imwe MSP inobvisa kudiwa kwemunhu bhizimisi IT mhinduro, hunyanzvi, uye bhizimisi vaongorori semabasa akakwenenzverwa achaitwa pasi pechinhu chimwe.
IT Zviwanikwa uye Hunyanzvi
Business IT mhinduro dzave madikanwa kuti utarise matanho akakosha uye matanho ekudzivirira anogona kubatsira yako bhizimisi kukura. Rubatsiro rwenyanzvi runogona kugadzira nzira bhizimisi kubudirira uye kuratidzika kunge kunobatsira zvakanyanya. Zvikwata zvemukati zveIT zvinofanirwa kukwidziridza maitiro zuva rega rega kuti zvigadzirise nepamusoro cyberattacks. NeMSP imwe chete haufanire kuhaya chero vashandi vekuwedzera vanochengeta mashandiro ako eIT.
Ivo vanopa masevhisi eIT vakaita seMSPs vane hutongi hwakakwana pamusoro petekinoroji yepamusoro uye mhinduro dzinobatsira dzinobatsira kutsigira kwako. bhizimisi. Nekufamba kwenguva, iyo IT mashandiro uye masheki anoda kuvandudzwa kuti arwise kurwisa hunyanzvi hwekuita uye matipi evanobira. Iyo data centers uye chibatiso maitiro anofanirwa kuvandudzwa nekufamba kwenguva. Hsi inobatsira yako bhizimisi nechokwadi chitsvene IT zvivakwa uye midziyo iripo yezvose bhizimisi kushanda nenzira inobudirira.
Kana nzvimbo dzedata dzave dzese dzakachengetedzwa uye dzadzivirirwa, chibatiso inodiwa kune bhizimisi. Yese data inofanirwa kuchengetedzwa munzvimbo yepakati kuti ibvise loopholes muhurongwa hwako. Ese maapplication akabatanidzwa panzvimbo imwechete anozadza maburi akavhurika kubva pano data inogona kuburitswa. Uyezve, manejimendi inova nyore kune MSP.
MSP inokupa rubatsiro rwakakwana nenzvimbo dzedata uye masevhisi eIT ako bhizimisi. Nekushandisa kwakawedzerwa chibatiso maitiro uye maitiro, iwe unogona kugadzirisa nzira dze bhizimisi chibatiso uye kuchengetedza data. Nzvimbo dzedhata uye kuvanzika kwehurongwa kunotungamirwa neMSP iyo inomisa njodzi yekubiridzira uye cyberattacks.
NeMSP, iwe unogona kugara uine nzira inowirirana kune IT kubvunzana pese paunoda. Haufanire kutora rubatsiro kubva kune chero vamwe vanopa masevhisi eIT. Nekuchinja bhizimisi masimba uye zvinodiwa nevatengi, iyo MSP inogona kukupa iwe-yekupedzisira nzira dzekuona kutorwa kwevatengi uye kuchengetwa kwevatengi. Kubva bhizimisi mari kune tekinoroji stack uye nzira dzekushambadzira kune vakakwanisa IT services, iwe unogona kutora rubatsiro kubva kuMSP kune rako bhizinesi kukura.
Bhizinesi rega rega nesangano rine data rakavanzika rakawanda rine ruzivo rwevatengi rwakadzama uye mamwe ehurongwa hwesangano. Iyo data inofanirwa kuchengetedzwa nenzira dzese kudzikamisa chero faindi dzekutonga. Iro ibasa reMSP kutora matanho epamusoro-soro ekuchengetedza ruzivo rwese uye kuve nechokwadi chekuchengetedza data uye chibatiso yedata centers ine advanced approaches.